Global Voices teny Malagasy » Gazety Iraniàna Manangona Ireo Fanararaotana Sy Fitondra Tsy Mendrika Atao Amin’ny Ankizy Afgàna Any An-tsekoly · Global Voices teny Malagasy » Print
Gazety Iraniàna Manangona Ireo Fanararaotana Sy Fitondra Tsy Mendrika Atao Amin'ny Ankizy Afgàna Any An-tsekoly
Voadika ny 22 Febroary 2016 2:55 GMT 1	 · Mpanoratra Center for Human Rights in Iran Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zon'olombelona
Iharan'ny fanararaotana sy fitondra tsy mendrika ireo ankizy Afgàna mpianatra ao Iràna. Sary avy amin'ny ICHRI. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny 5 Janoary 2016, notaterin'ny gazety Shargh  fa nikapoka ankizy Afgàna dimy mpianatra ao aminy ny tomponandraikitry ny sekoly iray ao Damavand, fantson-drano no nampiasainy ary namela marika eny amin'ny tarehy sy ny vatan'ireo ankizy, sady narahany teny hoe: “Tokony handeha any ianareo Afgàna itony. Be loatra ianareo.”
Iharan'ny famaizana ara-bàtana sy fanavakavahana ireo Afgàna mpianatra any amin'ny sekoly Iraniàna, araka ny tatitra ataon'ny mpampahalàla vaovao ao Iràna izay ezahan'ny fitondràna ny hanafoana azy.
“Tsy tongatonga ho azy eny anaty fampahalalam-baovao ireo tatitra momba ny ankizy mpianatra niharan'ny fanararaotana, indrindra fa ireo Afgàna mpianatra, satria ireo masoivoho mpanaramaso sy ny Ministeran'ny Fanabeazana dia miezaka ny hanafoana ireny tranga ireny,” hoy i Shirzad Abdollahi, manampahaizana iray amin'ny raharaham-panabeazana ao Iràna, tamin'ny resany ho an'ny Fanentanana Iraisampirenena momba ny Zon'Olombelona ao Iràna.
Toerana ialofan'ny ampahany betsaka amin'ireo mpitsoa-ponenana marobe manerana izao tontolo izao i Iràna, misy 950.000 ireo Afgàna voarakitra tamin'ny 2015, araka ny voalazan'ny United Nations High Commissioner for Refugees  (UNHCR) – Kaomisera Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana Misahana Ireo Mpitsoa-ponenana.
Ny fitondra tsy mendrika atao an'ireo Iraniàna mpianatra any an-tsekoly, na izany sazy ara-batana, na amin'ny fiteny sy ny fanalàna baraka, dia efa mahazatra ao Iràna, hoy i Abdollahi, saingy ratsy kokoa izany ho an'ireo ankizy Afgàna satria tsy dia manana fiarovana loatra ry zareo. Mirona mankany amin'ny fandraisana an-tànana ireny tranga ireny ny rafitry ny fanabeazana saingy tsy miditra amin'ny fanasaziana ireo mpitantana manao fanararaotana, ary ezahan-dry zareo aza ny manafina izany tsy ho hitan'ny mpanao gazety, hoy izy tamin'ny Fanentanana ho an'ny Zon'Olombelona.
Betsaka ihany koa ireo ankizy Afgàna tsy mbola manana antontan-taratsy momba azy no miatrika sakàna rehefa miditra birao, izay manakana azy ireny tsy ho afaka mamonjy sekoly, fanitsakitsahana iray indray ny fifanarahana iraisampirenena izay miantoka ny zo hahazo fanabeazana.
Voadaroka sy noroahana avy any an-tsekoly ny ankizy Afgàna iray mpianatra tao an-tanànan'i Pakdasht noho izy tsy nahaloa saram-pianarana, araka ny tatitra vao haingana nivoaka ny 16 Janoary 2016 tao anatin'ny gazety Vaghaye Ettefaghieh .
Zara raha nahaloa ny iray tapitrisa ‘rials’ (eo amin'ny 33 dolara amerikàna eo) ny ray sy reniny, tamin'ny 2,3 tapitrisa ‘rials’ (76 dolara) notakian'ilay sekoly. Nilazàna mba tsy hiverina any an-tsekoly ilay mpianatra raha tsy voaloa tanteraka ny saram-pianarany.
Taorian'ny tranga ny Janoary tao Damavand, niteny tamin'ny gazety Sharg ny iray tamin'ireo ray aman-dreny,
Nanatona ary nitaraina tamin'ny tomponandraikitry ny sekoly tao amin'ny distrika izahay ary nandefa mpanao fanadihadiana tany amin'ilay sekoly ry zareo. Saingy taorian'izany rehetra izany, niteny taminay ny talen'ny sekoly fa tsaratsara kokoa raha tsy notaritaritina lavitra ny raharaha…Nolazainy fa mpanakorontana ny zanakay ary izany no nahatonga ny hatezeran'ilay lehiben'ny sekoly.
Tamin'ny taona lasa, ankizy Afgàna efatra mpianatra amin'ny ambaratonga fototra no nosazian'ny mpampianatra avy aminà sekoly iray hafa ao Pakdasht, tamin'ny fanerena azy ireo hanatsoboka ny tànany tao anaty kabone, araka ny tatitra avy tamin'ny Tabnak news ny 10 Febroary 2016 teo.
“Tsy hoe fomba fanao any rehetra any ny fitondra tsy mendrika manjo ireo Afgàna mpianatra, fa raharahan'ny sekoly izany, miankina amin'ny finoan'ireo tale, lehibe na mpampianatra ao” hoy i Abdollahi tamin'ny Fanentanana.
Nampiany hoe “Tsy ampy fiofànana loatra momba ny zon'ny ankizy ireo mpampianatra sy mpitantana”.
Ato anatin'ny fotona fohy, tsy maintsy hisy ny fanarahana maso tsaratsara kokoa ireo tale sy mpampianatra ary dia hosaziana henjana mihitsy izay rehetra fanitsakitsahana tratra. Tokony hijoro ireo mpampianatra manana fahamendrehana, izay maro fa tsy hoe vitsy, hanohitra ireo mpiaramiasa manao fanararaotana… Tokony hampitombo ny fampahatsiarovan-tsaina momba ny zon'ny ankizy ihany koa ny mpampahalàla vaovao, ary manao izay hahatonga ny fiarahamonina ho sarotiny amin'ny fitondra tsy mendrika atao amin'ny mpianatra.
“Tsy misy mihitsy torolàlana ofisialy manome alàlana ny herisetra ara-bàtana atao amin'ireo Afgàna mpianatra. Ny fomba fijerin'ny fiarahamonina no olana,” hoy i Abdollahi.
“Taona vitsy lasa izay, nifamory teo anoloan'ny sekoly tany amin'ny manodidina azy ny andiany iray nahitàna ireo fianakaviana tao amin'ny distrikan'i Kan ao Tehran, mba hampitsaharana ny fandraisana Afgàna mpianatra tao,” hoy izy.
Fanampin'ny fanararaotana ara-bàtana sy ny fanavakavahana, marefo ara-bola ihany koa ireo Afgàna mpianatra satria ny ray aman-drenin-dry zareo, izay mpitsoa-ponenana ny ankamaroany, dia kely fidirambola raha mitaha amin'ireo Iraniana antonontonony.
“Hatramin'ny taona lasa, efa somary nivaha ihany ny olan'ny sarampianarana ary tsy angatahana amin'ireo sekoly intsony ny hitakiany sarampianarana amin'ireo Afgàna mpianatra,” hoy i Abdollahi. “Mety angatahana fandraisana anjara an-tsitrapo ry zareo ho an'ny fandaniana sasantsasany ataon'ny sekoly, fa tsy mazava ny hoe ny inona no an-tsitrapo ary ny inona no tsy izy.”
“Na izany aza, ambaran'ny fitsipika fa manana zo mitovy amin'ireo Iraniàna mpiray kilasy aminy ireo Afgàna mpianatra, ary tsy misy na iza na iza manana zo hanao fitondra tsy mendrika azy ireo,” hoy izy.
Tamin'ny 2011, nanambara  ny lefitry ny Minisitry ny Fanabeazana momba ny raharaha iraisampirenena fa voaràra ny fisoratana anarana ho an'ireo vahiny mpianatra any amin'ireo sekoly manokana ho an'ny maranitsaina, hatramin'ny sekolim-panjakana fàka tàhaka sy ireo sekoly fiofànana momba ny asa, fanitsakitsahana ny zo iraisampirenena miantoka ny fahazoana fianarana ambony.
“Tsy tokony hizàka ny fiovaovan'ny filàna araka ny vanim-potoana, na ny governemanta, ny politikan'ny fanabeazana. Zo ekena ho an'ny ankizy ny hahazoany fanabeazana, tsy ijerena ny zompireneny, ny foko niaviany, ny sata misy azy araka ny toeram-ponenany na ny fahafahany ara-bola,” hoy i Abdollahi tamin'ny Fanentanana.
“Tsy maintsy hajaina tanteraka io zo io, tsy misy fiantraikany na kely aza avy amin'izay fanovàna governemanta na politika,” hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/22/79452/
 United Nations High Commissioner for Refugees: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96&submit=GO